Simia organika | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Simia organika | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / Archives ho an'ny siansa sy ny natiora / siansa / simia / Simia biolojika
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Methionine sy Selenomethionine
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny methionine sy selenomethionine dia ny methionine dia asidra amina proteinina tena ilaina izay misy solifara, fa ny selenomethionine kosa dia avy amin'ny methionine misy selenium mifatotra amin'ny methionine asidra amine. Methionine dia asidra amine tena ilaina ho an'ny olombelona. Selenomethionine dia asidra amine voajanahary misy atoma selenium miraikitra amin'ny […]
Inona ny fahasamihafana misy eo Adapalene sy Tretinoin
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny adapalene sy tretinoin dia ny hoe adapalene mampiseho fahombiazan'ny fanoherana ny mony raha oharina amin'ny tretinoin. Adapalene sy tretinoin dia zava-dehibe toy ny fanafody amin'ny mony amin'ny hoditra. Na izany aza, ny asan'ny fanafody tsirairay dia samy hafa amin'ny miankina amin'ny fahombiazany amin'ny fitsaboana ny mony. LOHAHEVITRA 1. Topy maso sy fahasamihafana lehibe 2. Inona ny atao hoe Adapalene […]
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'i Heptane sy N-Heptane
30 Jolay 2021 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny heptane sy ny n-heptane dia ny heptane dia fitambarana organika misy atôma karbonika fito nalamina tamina rafitra misy sampana na tsy misy sampana, fa ny n-heptane kosa dia ny rafitra tsy misy rantsan'ny molekiola heptane. Ny endrika simika amin'ny heptane dia C7H16. Izy io dia ilaina indrindra amin'ny alàlan'ny solvent nonpolar. Heptane dia afaka mamoaka organika maro […]
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny triglycerides tsy mahasalama
29 Jolay 2021 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny triglyceride voky sy tsy miangona dia ny triglycerides tototry ny fifamatorana tokana eo anelanelan'ny atômôna karbaona, fa ny triglycerides tsy matavy kosa dia misy fatorana roa na telo heny eo anelanelan'ny atôro karbonika. Ny teny hoe tototry dia midika fa ny atômôna karbonika ao amin'ny molekiola dia tototry ny hidrôzenina na ny atôma hafa mifamatotra amin'ny famatorana sigma covalent efatra manodidina ny tsirairay […]
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Metoprolol Tartrate sy Metoprolol Succinate
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny metoprolol tartrate sy metoprolol succinate dia ny metoprolol tartrate dia tsy misy afa-tsy amin'ny takelaka famoahana eo noho eo, noho izany dia mila maka azy imbetsaka isan'andro isika, fa ny metoprolol succinate kosa dia takelaka maharitra afaka haintsika indray mandeha isan'andro . Metoprolol tartrate sy metoprolol succinate dia endrika roa fanafody. Izahay […]
Inona no maha samy hafa ny L Citrulline sy ny Citrulline Malate
18 Jolay 2021 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny citrulline L sy ny citrulline malate dia ny L citrulline dia asidra amine tsy ilaina, fa ny citrulline malate kosa dia avy amin'ny citrulline noforonina avy amin'ny fifangaroan'ny citrulline sy ny asidra malic. L citrulline sy citrulline malate dia tonga amin'ny endrika famenony. Azontsika atao ny mampiasa ireto akora ireto mba hitondrana fitsaboana malefaka […]
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny homolisis sy ny heterolisis
16 Jolay 2021 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny homolisis sy ny heterolysis dia ny homolysis dia ny fanapotehan'ny fitambaran'ny simika amin'ny fizarana roa mitovy simika, fa ny heterolysis kosa dia ny fanapotehana ny fitambaran'ny simika ho faritra roa simika samy hafa. Azontsika atao ny mampiasa herin'ny dissociation energies an'ny singa simika mba hamaritana ny fizotra homolisis sy heterolysis. Angovo misaraka amin'ny fatorana […]
Fahasamihafana eo amin'ny fanoloana radika maimaim-poana sy ny fanampiana radika maimaim-poana
8 Jolay 2021 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny fanoloana radika maimaim-poana sy ny fanampiana radika maimaim-poana dia ny fanoloana radika maimaimpoana izay mitaky ny fanoloana vondrona miasa miaraka amina vondrona miasa hafa, fa ny fanampiana radika maimaim-poana kosa dia misy ny fampidirana vondrona miasa vaovao ho molekiola. Ny radika maimaim-poana dia mety ho atôma, molekiola na ion izay misy […]
Fahasamihafana eo amin'ny PFOA sy PFOS
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny PFOA sy PFOS dia ny PFOA manana vondrona miasa carboxylic, fa ny PFOS kosa dia manana vondrona miasa sulfonic. PFOA sy PFOS dia fitambaran'ny organofluorine. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ireo zavatra roa ireo dia misy atômôna karbonika mifamatotra amin'ny atôma fluorine. Noho izany, ireo akora ireo dia manana toetra tsy manam-paharoa. LOHAHEVITRA 1. Topy maso sy fahasamihafana lehibe […]
Fahasamihafana eo amin'ny Android 3.0 (Honeycomb) Tablet OS sy Blackberry Tablet OS QNX
Fahasamihafana eo amin'ny Castle sy Fort
Fahasamihafana amin'ny governemanta lalam-panorenena sy ny lalàm-panorenana
Fahasamihafana eo amin'ny taxi sy postulate
Fahasamihafana eo amin'ny Samsung Galaxy Player 5 sy Galaxy Tab